Vashandi Zana Vosiiwa paMhene Mushure Mekutorerwa Purazi kweMumwe Muchena kuRuwa
Vanhu vanodarika zana vanga vachishanda papurazi reProtea Valley kuRuwa vanoti zvinhu zvavaomera zvichitevera kudzingwa kwakaitwa murungu wechichena anga achirima papurazi iri, VaMartin Grobler.
Vanhu zana nemakumi maviri vanga vachishanda papurazi iri vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekudzingwa kwakaitwa VaGrobler papurazi iri mukupera kwesvondo rino naAmai Ivy Rupindi avo vanoshanda mubazi rezvekurima pamwe nekugoverwa kweminda.
Amai Rupindi vanonzi vakasvika papurazi apa nezvikonzi zvedare repamusoro neChishanu vakasiya vapa VaGrobler zuva rimwe chete rekuti vatute zvinhu zvavo papurazi apa mushure mekunge mbatya dzavo dzaburitswa panze nezvikonzi.
Pakasvika Studio 7 neMugovera papurazi apa zvikonzi zvaigwejenura mikova yepamba yaVaGrobler uye VaGrobler vakange vachituta zvinhu zvavo vachibatsirwa nehama dzavo nevamwe varimi vechichena.
Mumwe wevanga vachishanda papurazi apa, Amai Pamhidzai Kambukuzi, vanoti VaGrobler vaivabata zvakanaka chose zvekuti havachaziva pekutangira.
Izvi zvinotsigirwawo naVaYambani Chiunjiza avo vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa avo vanoti vave nemakore anodarika gumi nemashanu vachishanda paurazi apa.
VaGrobler, avo vanoti vakazvarirwa muZimbabwe uye hapana imwe nyika yavanoziva, vanoti vanga vave nemakore akawanda vachinetsana naAmai Rupindi nenyaya yepurazi iri vakati vazopedzisira vasvika kuhofisi yegurukota rezvekurima uko kwavanoti vakanzi vabhadhare mari yechiokomuhomwe kuti vapihwe magwaro epurazi iri, kana kuti offer letter, iyo yavanoti vainge vasina panguva iyoyo.
Vaendenderera mberi vachiti vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 vachirima fodya, chibage pamwe nekuchengeta mombe. Vanoti makore ose avagara papurazi iri vanga vachibhadhara mari yekushandisa purazi iri kumuridzi waro uyo anonzi akazoshaya gore rapera. Vanoti hondo yavo yakatangira pakushaya mari yechiokomuhomwe yavanoti yaidiwa iyi.
Pavakazotorerwa purazi iri naAmai Rupindi neChishanu, VaGrobler vanga vainemeibhedha yembeu yefodya yavanga vachitarisira kutanga kudyara neChishanu chinouya uye vange vaine mombe mazana matatu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaMasimba Manyanya, avo vaimboshanda mubazi rezvemari, vaudza Studio 7 kuti hupfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi sezvo vachiti hupfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima.
Izvi zvatsinhirwawo nemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatshwayo, avo vanoti mapurazi anofanira kushandiswa zvakasimba kwete kuti vanotora mapurazi vanoswera vachirima sora.
Rimwe gweta VaKudzai Kadzere vati zvakaitika papurazi raVaGrobler zvinoratidza kuti hurumende haisi kumira nemashoko ayo ekuti mapurazi ari kushandiswa zvakanaka haafanire kuvhiringidzwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa VaToendepi Shonhe, vaudza Studio 7 kuti kuramba hurumende yongotora mapurazi kuchaita kuti mari yemuripo inofanira kubhadharwa varimi vakatorerwa mapurazi irambe ichiwanda.
Zvichakadai, Amai Rupindi vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi vakati titaure negurukota mubazi ravo VaAnxious Masuka avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo kubva nezuro.
Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko VaNick Mangwana vakanyora padandemutande ravo kuti hurumende iri mubishi kuongorora chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo kuti VaGrobler vazobviswa papurazi ravo.
Nhasi tattumira VaMangwana mubvunzo paWhatsApp kuti pane chabuda here muongororo yavo asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo.
Zvichakadai, mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vabuda mubepanhau reSunday Mail vachiti mari yekuripa varimi vechichena vakabviswa mumapurazi haisi kuzobva muhomwe yehurumende asi kuti mari iyi ichatotsvagwa kubva kunze kwenyika.
Izvi zvinotevera kuchema chema kwevamwe munyika kuti hurumende nechibvumirano chayakaita nevarimi vachena cheGlobal Compensation Deed. Makurukota ehurmende ari kupesana zvakanyanya panyaya yekuti ndiyani achabhadhara mari iyi.
Sangano reCommercial Farmers Union rinoti pane varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakarasikirwa nemapurazi avo uye vashandi vavo vakasara vasina chekubata zvichitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema.